Hadda waxaa loo heli karaa beta lixaad ee Android 10 ee loogu talagalay Galaxy S10 | Androidsis
Beta-kii lixaad ee Android 10 ee Galaxy S10 hadda waa la heli karaa
Samsung oo leh Android 10 ayaa "dab ku jira" sida badanaa loo sheego. Shirkadda Kuuriya ayaa hadda soo saartay beta cusub oo cusbooneysiin ah oo keenaya Android 10 Galaxy S10 noocyada ay ka muuqato terminalkani suuqa. Beta-kan cusub, waxay timaaddaa saddex maalmood ka dib markii la bilaabay tii shanaad.
Beta-kii afaraad ee Samsung's S10 oo leh Android 10 ayaa la sii daayay 6 maalmood ka hor. Tiro badan oo ah casriyeynta beta toddobaad gudihiis, waxay ka duwan tahay xasilloonida ay qaadanayso - Android 10 betas ee Galaxy Note 10, Tani qayb ahaan waa macquul, maaddaama S10 uu suuqa ugu dheeraa.
Cusbooneysiintan cusub, oo lambarkiisa firmware uu yahay G97 ** XXU3ZSKJ Waxaa laga heli karaa dhammaan waddamada qaybta ka ah barnaamijka beta kaas oo ay ka mid yihiin: Spain, Jarmalka, Faransiiska, Hindiya, Poland, Boqortooyada Ingiriiska, Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka. Beta-kan cusubi wuxuu xalliyaa cilladaha kala duwan sida dib-u-u-hagaajinta qalabka markii aan la wadaageyno xiriirka internetka boosteejooyin kale, baarka dhawaaqa oo aan soo muuqan iyo xaaladda barta oo isbeddeleysa.
Beta-kan cusub waxaa ka mid ah balastarka amniga ee bisha Diseembar, sidaa darteed ku dhowaad dhammaan itimaalka, nooca ugu dambeeya ayaa la heli doonaa kahor dhammaadka sanadka. Haddii aad ka mid tahay barnaamijka beta 10 ee loogu talagalay Samsung Galaxy S10, kaliya waa inaad tagtaa xulashada qaabeynta qalabkaaga oo guji cusbooneysiinta barnaamijka.
Ahaanshaha beta, marwalba waa lagugula talinayaa samee gurmad ah dhammaan xogta aan dooneyno inaan lumino, tan iyo, in kasta oo aysan inta badan dhicin, howshu way dhici kartaa mar uun waxayna nagu qasbeysaa inaan dib u soo ceshano qalabka gebi ahaanba xoqida, lumino dhammaan macluumaadka aan kaydsannay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Beta-kii lixaad ee Android 10 ee Galaxy S10 hadda waa la heli karaa
Fiidiyowgaan wuxuu xaqiijinayaa naqshadeynta iyo qeyb ka mid ah astaamaha Huawei MatePad Pro
Khasaarooyinka ku jira Bakhaarka Play?